Ho vitako ve ny hanavao ny Xiaomi amin'ny MIUI 8? Mialà amin'ny fisalasalana eto | Androidsis
Ho vitako ve ny hanavao ny Xiaomi amin'ny MIUI 8? Mialà amin'ny fisalasalana eto
Amin'ny 11 Jolay ho avy izao ny orinasa Xiaomi hamoaka ny beta ampahibemaso voalohany an'ny MIUI 8; iray volana monja taty aoriana, amin'ny 16 Aogositra, kasaina hivoaka ny kinova miorina voalohany. Amin'izao fotoana izao, inona ny mpampiasa manontany tena dia tsy misy afa-tsy ny hoe hain'izy ireo ve ny manavao ny terminal-n'izy ireo amin'ity kinova vaovao an'ny rafitra fiasa ity.
Miverina miresaka momba ny iray amin'ireo orinasa tadiavinay indrindra izahay, nefa tsy ilay tena ao anatin'ny panorama Android, Xiaomi. Ary amin'ity indray mitoraka ity dia ataonay hilazana anao izany iza amin'ireo fitaovana novaovinao ho MIUI 8.
ny terminal Xiaomi Miara-miasa amin'ny rafitra fiasan'i Google izy ireo, Android, na izany aza ny orinasa sinoa dia manonta sosona fanaingoana antsoina hoe MIUI izay misy fanatsarana marobe, indrindra amin'ny lafiny famolavolana, manakaiky kokoa ny iOS noho ny Android.
Ao amin'ny kinova fahavalo MIUI dia nohavaozina tanteraka sy safidy mahaliana tahaka ny dika mitovy amin'ny rindranasa, raha te hanana Facebook roa ianao, WhatsApp roa, Telegram roa na roa na inona na inona.
Nasongadin'izy ireo ihany koa ireo fisehoan-javatra vaovao hafa toa ny "Second Space" hahafahan'ny mpampiasa roa mampiasa tablet iray mitovy nefa tsy miankina.
fa MIUI 8 misy vaovao maro hafa efa nolazainay taminao amin'ny Google.
Azo antoka fa manana faniriana be ianao hanombohana ny fanandramana azy, ary tsara vintana ianao, satria Xiaomi hamela ireo fitaovana fanavaozana efa mihoatra ny efa-taona. Mampino marina? Mbola misy antony iray hafa itiavantsika an'ity orinasa ity.
Ho famintinana ny fitaovana Xiaomi rehetra dia afaka manavao ny MIUI 8, andao jerena tsirairay:
Fanamarihana Xiaomi Redmi
Ireo mpampiasa Xiaomi Soa ihany izy ireo, araka ny nolazaiko, amin'ny marika hafa dia tsy mijaly amin'ny lahatra mitovy amin'izany izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ho vitako ve ny hanavao ny Xiaomi amin'ny MIUI 8? Mialà amin'ny fisalasalana eto
Redungeon no mpitsangatsangana trano-maizina vaovao an'i Nitrome
Android 7.0 Nougat dia eo an-dàlana ho an'ny HTC 10, One A9 ary One 9